सानैमा आमाको निधनले पर्साको सखुवा प्रसौनीको रामभौरीमा जन्मिएका रामदेव थारुको बाल्यकाल सुखद् नभए पनि उत्तरार्धमा सकस हुन थालेको छ । २८ बर्ष पुरानो आफ्नै व्यवसाय एकाएक खस्कन थालेपछि वि.सं. १९९६ मा जन्मिएका थारुको जीवनको उत्तराद्धर्मा पनि सकस हुन थालेको हो ।
२८ बर्ष अगाडी हालको वीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं. ११ रानीघाट पुल नजिकमा संचालन गरेको तेल मिल पहिले जस्तो चल्न छोडेपछि रामदेवलाई जीवनको उत्तरार्धमा पनि वेचैनी छाएको छ । स्वं बम राय थारु र स्व.बेचनी देवी थरुनीका चारसन्तान मध्ये दोस्रो हु्न् । उमेर ८० बर्ष भए पनि उनका काम गर्ने जोस् र जाँगर भने युवाको भन्दा उनमा कम छैन । उनी एक्लै तेल मिल चलाउँछन् । ११ बर्षमा नै आफ्नी आमाको स्वर्गारोहण भएपछि ११ बर्षको उमेरमा नै विवाह बन्धनमा बाँधिएका थारुका २ छोराहरु भएको उनले बताए ।
बसडिलवा स्थित पचगावाँ सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेकै समयमा आमाको निधनले पछि काकाको खर्चमा शैक्षिक खर्च टार्दै कक्षा ६ सम्म पढेको उनले बताए । पछि काकाले पनि अध्ययन खर्च दिन नसक्ने भनेपछि मेरो पढाइमा पूर्णबिराम लाग्यो उनले विगत सम्झिए ।
पढाइ रोकिएपछि खेती किसानी गर्दै आफ्नो दैनिकी चलाइरहेको थिएँ । पछि वि.सं. २०२८ सालमा सदरमुकाम बसाई सरी विगत २८ वर्षदेखि तेल मिल संचालन गर्दै आएको छु । त्यो समयमा रु १ लाख ५० हजारको लागतमा स्थापना गरेको तेल मिलमा पहिले २ हजार देखि ५ सयदेखि ३ हजार ५ सयसम्म दैनिक आम्दानी हुने गर्दथ्यो । तर हाल रेडिमेट तेल खाने मानिसको संख्या बढेकोले तेल मिलको अवस्था खस्केको छ थारुले विस्तारमा बताए ।
पहिला स्वस्थलाई बढि प्राथमिकता दिने मानिसहरु थिए कि भन्ने लाग्छ । अहिले त तयारी अवस्थाको तेल बढि चल्छ । तयारी अवस्थाको तेलमा कति शुद्धता छ । त्यो स्वस्थका लागि कति प्रभावकारी छ ? भन्ने खासै हेरिदैन उनले तर्क गरे । समयको परिवर्तनसंगै फेरिएको मानव शैलीले पूरानो व्यवसाय धरासायी बन्दै छ ।
यसको अलावा मानिसको स्वास्थ्यमा पनि ह्रास आउन थालेको छ । यो कुरालाई विचार नगर्ने हो भने पुरानो व्यापार व्यवसायले धारासायी बन्ने मात्र होइन मानिसको स्वास्थ्य पनि धारासायी बन्छ थारुले बताए ।
कोरोना कहर, रोकथाम र नियन्त्रण
लकडाउनमा निःशुल्क दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराउन संसाद यादवको माग
एस. ई. ई. परिक्षा स्थागित, प्रश्नपत्र बाहिरिने सम्भावना प्रबल
चैत्र ५, २०७६ सन्ध्या पौडेल
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा अख्तियारको टोली, छानविनमा सवारी फाँटका कर्मचारी
फाल्गुन १४, २०७६ सन्ध्या पौडेल